Ezilahlwayo IiBhayibhile zamazinyo, iipakethe zokufakelwa kwamazinyo-Vayu
Soloko ubonelela nge-One-Stop-Solution uhlala ufika kuyo
Shanghai JPS zamazinyo CO., LTD iye kubonelela iimveliso zamazinyo kubathengi abasuka kumazwe angaphezu kwama-80 kunye nemimandla. Ezona mveliso zethu ziphambili zamazinyo sisixhobo samazinyo njengokulinganisa kwamazinyo, isitulo esinyuswe iyunithi yamazinyo, iyunithi yamazinyo ephathekayo, i-oyile isiguquli kunye ne-autoclave, njl. Kunye nokulahlwa kwamazinyo njengokufakelwa kwikhithi, ibhibhi yamazinyo, iphepha le-crepe, njl.
I-CE kunye ne-ISO13485 yethu ikhutshwe yi-TUV, eJamani.
ISHISHINI LAKHO OLUNOKWENZEKA Iqabane ECHINA
Sihlalo wamazinyo JPSF600
Isiguquli somoya esineoyile
sicebisa ukuba ukhethe
Amazinyo e-JPS abonelela ngeemveliso ezinokuthenjwa kunye ne-One Stop Solution kubo bonke abathengi
Phantse iminyaka engama-20 kwishishini lamazinyo nonyango
I-ISO 13485 iqinisekisiwe kwaye ngaphezulu kweemveliso ezingama-60 ine-CE
Isityebi esinamava kwiithenda zikarhulumente
Isisombululo esinye se-Stop sokuthenga ngokubanzi
kutshanje izifundo zetyala
Isixhobo samazinyo seJPS
Umgangatho ophezulu wokuFundisa amazinyo ngokuQeqesha amazinyo
Abathengi baseBritane bathi:
Iqela leJPS, abathengisi bethu abathembekileyo bokubonelela ngezinto zokubhala. Siyavuya ngumgangatho weenkonzo zakho kwaye siyabulela ukuphendula kweJPS kunye nobungcali kwishishini. I-JPS inokuthenjwa kwaye siyabulela koku, sikwazile ukugcina abathengi bethu benelisekile. Siza kujonga phambili kubudlelwane obuqinisekileyo beshishini.
Abathengi baseSweden bathi:
Embindini wokuqhambuka kwentsholongwane, uxinzelelo kunye noloyiko olwagqugqisa kumazwe ngenxa yokunqongophala kwezixhobo zokuzikhusela. I-JPS inyukile kwaye yahanjiswa ngokuchaneka kunye nomgangatho. Ngexesha apho izinto zazibonakala zingenakwenzeka, iJPS yenza ukuba kwenzeke. Kithi iJPS liqabane lobomi bonke!
Ukusukela ukusekwa kwayo kwiminyaka eli-11 eyadlulayo, i-JPS Dental izinikezele ekuboneleleni abathengi nge-ONE STOP SOLUTION yeemveliso ezinokuthenjwa ezifumene igama elihle kumzi mveliso wamazinyo kwaye bafumene intembeko exabisekileyo kubathengi kwihlabathi liphela.